Maninona izao tontolo izao no mila mpiasa maivana kokoa noho ny hatramin'izay - Blog
Raha tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana / hetsika ara-panahy vaovao ianao (ary raha mamaky lahatsoratra amin'ity tranonkala ity ianao, dia mety hisy izany), dia azo antoka fa fantatrao amin'ny olona fantatra amin'ny hoe jiro .
Raha ny tena izy dia azo inoana fa nahita olona maromaro milaza ny tenany ho toy izany ianao. Mety ho olona fantatrao avy amin'ny vondrona sosialinao ireo, ireo arahinao amin'ny Instagram sy Twitter, na ny sakaizanao izay niara-nihira taminao taorian'ny kilasinao yoga mafana.
Ity misy zavatra: ny olona izay nanalavitra ny fomba 'nifohazany', amin'ny ankapobeny dia tsy. Raha fitiavana sy hazavana fotsiny no resahan'izy ireo ary mandà tsy hanaiky akory ireo lafiny aloky ny psyche olombelona, ​​avelao izy hiditra ao anatiny, dia azo inoana fa matahotra zavatra izy ireo ary manafina izany amin'ny fomba ilaina rehetra.
Ny fahazavana dia tsy fizarana fotsiny fitiavana tsy misy fepetra amin'ny endrika meme manjelanjelatra feno fanamafisana tsara: momba ny hazavana mamirapiratra mankamin'ny zoro maizina tsy aleon'ny ankamaroan'ny olona mijery izany… fa ao anatin'ireo alokany ireo no tena fisehoan-javatra sy fitomboana.
Mety handratra toy ny helo ny fahamarinana
Ny ankamaroan'ny olona dia hanao izay rehetra azony atao mba hisorohana fanaintainana. Hamorona tontolon-diso hipetrahana sy hitrandrahana endrika fialokalofana tsy tambo isaina izy ireo fa tsy hiatrika sy hanaiky fahamarinana izay aleon'izy ireo tsy hifandahatra.
Raha manao izany dia matetika tsy tena mahatsapa ny fanimbana aterak'izy ireo amin'ny fiainan'ireo manodidina azy izy ireo. Tena mifantoka amin'ny fiarovana ny tenany amin'ny loza mety hitranga izy ireo ka mandray izay dingana rehetra heveriny fa ilaina mba hijanonana ho 'azo antoka'… ary raha ny fieritreretana azy fotsiny dia mety ho tsapany fa nisy vokany ratsy ny fihetsik'izy ireo.
Betsaka no tsy manao izany. Mamerina hatrany ireo tsingerina ihany izy ireo indray mba tsy hijerena ireo boaty maizina mitazona ny fahamarinana atahorany izy ireo satria fantatr'izy ireo fa voa mafy izy ireo raha manao an'izany.
Mila mpiasa maivana izahay hampianatra antsika ny fomba mirona mankany izany fanaintainana izany fa tsy hitsaoka azy, satria ny fandavana ny lafiny maizimaizina dia mitarika fihetsika ratsy izay misy fiantraikany amin'ny olona rehetra manodidina antsika. Ny fiatrehana io fanaintainana io ihany no hahafoana ny heriny amintsika.
Ny tsy tsapan'ny olona misoroka fanaintainana dia hoe rahoviana ary raha tonga ny andro anaovany izany Aza miatrika ny fahatahorany, ary manokatra ny tenany amin'ireo fahamarinany manokana, izany no andro hahitany ny tena fandriampahalemana sy fahalalahana. Ny famoretana sy ny fandavana dia mahery vaika rafitra fiarovana tena , fa inona no tena hiafarany miaro olona? Misy fitoniana sy hafaliana miavaka hita eo amin'ny fanekena, saingy mitaky a betsaka herim-po hahatongavana any…
… Ary eo no idiran'ny mpiasa maivana.
Mandrosoa mankany amin'ny aloka
Tamin'ny lahatsoratra vao haingana, mpanoratra Doc De Lux nizara ny heviny momba ny mpiasa maivana:
'… Ny tena mpandeha trano dia tsy miresaka afa-tsy zavatra maivana sy malefaka indrindra. Miresaka momba ireo zavatra saro-kenatra sy hadino izy ireo, satria amin'ny fizarana ny fahalalany ny mavesatra, ny maharary, ny maizina, dia mitondra hazavana any amin'izay tsy dia nisy izy ireo. ”
Ny ankamaroan'ny olona dia TSY TE-hijery ny maizina.
Mahafinaritra azy ireo ny mitazona ireo endrika alokaloka, simba, tsy ilaina amin'ny fiainany ao anaty boaty mety, apetraka ao anaty lalimoara sy ao ambanin'ny fandriana… fa ny fametahana ireo izay tsy mitondra azy ireo Mandehana lasa. Rehefa tsy zahana sy karakaraina am-pangorahana ireo lafin-javatra ireo dia tsy sitrana izy ireo. Manadio sy manaparitaka ny zava-tsarotra amin'ny lafiny rehetra fotsiny izy ireo, ary misintona anay hatrany amin'ny lavaky ny bitro.
Rehefa tsy miatrika ny alokalontsika isika dia manaloka antsika izy ireo. Izy ireo dia mety hiteraka ny zava-drehetra manomboka amin'ny fahaketrahana sy ny fitaintainanana ka hatramin'ny fahatapahan'ny rafi-pitabatabana sy ny fizarana ara-tsaina. Rehefa tafiditra ao anaty nofinofisintsika ny aloky ny zava-misy iainantsika vinavina , mety hamely an'ireo manodidina antsika isika amin'ny fiezahana mafy hitazona ny rindrina, saingy ny rindrina tsy hijanona maharitra mandrakizay, sa tsy izany? Ny fahamarinana dia mahita fomba hivoahana raha tiantsika na tsia.
Izao tontolo izao dia mila mpiasa maivana kokoa noho ny hatramin'izay satria lasa tontolo feno ankizy petulant izay mitady fanelingelenana isika ary mahita fiononana amin'ny fironana lainga mibaribary izay hamely antsika haingana kokoa noho ny cataclysm vahiny rehetra.
Ny lafiny maizin'ny empaths
Ao an-tsain'ny olona saro-pady be
Mila Mifoha isika
Ny tontolo iray manontolo dia tototry ny fanaintainana ankehitriny, ary toa manakaiky teboka farany isika izay mety hitarika ady lehibe iray hafa, miaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro, ny tsy fahampian'ny rano ary ny tsy fahatokisan-tsakafo.
Anjarantsika tokoa raha manokatra ny tenantsika amin'ny fahamarinantsika manokana isika ary tonga ny endrika tsara indrindra amin'ny tenantsika izay ahafahantsika manana, mizara tena fitiavana, fanajana ary fihavanana amin'ny olon-drehetra eto amin'ity planeta ity, na milatsaka amin'ny tena ihany. -Ny negatives manjelanjelatra sy manjelanjelatra izay nanelingelina ireo taranaka teo aloha.
Betsaka ny olona mandray ny safidiny mifototra amin'ny tahotra, ka ny fahalalahana dia apetraka eo am-pelatanan'ireo izay hanampatra ny fahefany, fa kosa hahatonga ireo eo ambany fifehezany hahatsiaro ho “voaro”. Ny tsy fahalalana dia mety hahasambatra tokoa, saingy tena miaina ve ny mandositra, miafina ary misarika ny fironana hitsoaka?
Karazana lova inona no avelantsika amin'izao karazana fihetsika izao? Hanao ahoana izao tontolo izao taonjato iray manomboka izao? Inona no ho eritreritry ny taranaka ho avy amintsika, raha toa ka mahavita miaina ity karazana ity mihitsy?
'Tsy te hieritreritra an'izany aho' dia fanilihana tanteraka ny andraikitry ny tena manokana, ary ny fijanonan'ny fitomboan'ny tena manokana. Ny “te-hahatsapa ho voaro aho” dia miteraka xenophobia, fanilihana ny Hafa, ary fatratra tsy miraharaha amin'ireo izay mijaly. Ireo lohahevitra sy toe-javatra tsy mahazo aina rehetra izay mahatonga antsika hahatsapa ho tsy misy dikany dia ireo tena izy ireo fa mila mijery isika fa mila miara-mipetraka mba hahafantarana ny antony nandratra azy ireo, ary ny zavatra tokony hataontsika hanatsarana ny zavatra.
Ireo mpiasa maivana dia mitazona fitaratra eo imasontsika ary manery antsika hijery ireo toerana izay safidintsika tsy raharahantsika matetika satria mahatonga antsika tsy mahazo aina.
Ny tena mpandeha jiro dia mety hampivadi-po anao
Ny sasany amin'ireo maivana maivana indrindra dia misy ireo izay niaina zava-tsarotra tsy tambo isaina, saingy nizotra tamin'izany mba hahazoana fitomboana sy fahendrena. Mety niady nandritra ny taona maro izy ireo tamin'ny zavatra rehetra fironana manimba tena ny fiankinan-doha, saingy nitodika izy avy eo ary namakivaky ny lalan-kalehin'izy ireo namakivaky ny fangirifiriana noho ny fanaintainany ary nahita ilay lelafo nipitika izay nanintona azy ireo ho any amin'ny hazavana. Ho amin'ny fahamarinana sy ny fiadanana ary ny hery.
inona no hatao raha mankaleo ianao
Io hery io no hisarika ny olona tapaka sy hanimba azy ireo, fa mety hanosika ireo olona ireo ihany koa handeha ara-potoana. Ireo izay mamehy sy mandà ny lafin-javatra tena izy dia mety hahatsapa ho tsy mahazo aina amin'ny fanatrehan'ny mpiasa maivana, satria ny herin'izy ireo dia mety hanery ny hazavana mankamin'ny toerana maizina izay aleon'ny olona miafina. Ny hovitrovitra miaraka amin'izy ireo dia mety hitovy amin'ny masoandro amin'ny mitataovovonana: mety ho be loatra, ary mandoro ireo izay tsy vonona hiatrika izany aza.
Ireo mandany fotoana amin'ireo mpiasa maivana nefa tsy vonona hiroboka ao anaty tontolon'ny alokaloka dia matetika no mivoaka sy mandositra, miverina amin'ireo toerana ahitan'izy ireo fiarovana sy fampiononana. Miverina amin'ireo toerana mety hisian'ny fitomboana ambonimbony sy 'wokeness', satria io tsotra ny fanaovana quartz raozy sy ny sip bespoke kombucha ary 'mandefa hazavana' amin'ireo olona lavitra.
Izany tsotra handeha hamaky ny fihetsiky ny fiainana sy ny miaina fahazavana. Sarotra ny mijery an'io fitaratra io ary miaiky ny fihatsarambelatsihintsika manokana, ny hakanosantsika, ny fampijaliana ataontsika amin'ny hafa, ary mbola sarotra kokoa aza ny mametraka tena ezaka amin'ny fanovana ireo zavatra niainana rehetra izay mety hiasa tsara amin'ny hoditra ary hamoaka antsika ao amin'ny dingana hanafahana antsika.
Mila mpiasa maivana ankehitriny kokoa noho ny hatramin'izay isika, fa mila mampiditra ny jirony koa.
inona no hatao rehefa mandainga aminao ny lehilahy
wwe fampisehoana lehibe fihenan'ny lanja
dia fanjakana romana mifandraika amin'ny vatolampy
ahoana no hilazana raha misy bandy tia anao nefa matahotra